Ahoana ny fomba hamoronana mari-drano ao amin'ny Photoshop 2021 - Creativos Online | Famoronana an-tserasera
Una ny mari-drano mamela anao hanao sonia ny sarinao ary ialao izany, amin'ny alàlan'ny fampidirana azy ireo amin'ny tamba-jotra, dia mety hitera-doza ianao fa hampiasa ny sarinao nefa tsy manome ny fahamendrehana mendrika anao naka azy ireo. Raha ny marina, raha mivarotra ny sarinao ianao, mametra ny fidirana amin'ny zavatra hitan'ny mpampiasa ary, ambonin'izany rehetra izany, ny fampiasana dia zava-dehibe.
Sarotra ho ahy manokana ny mampiditra mari-drano amin'ireo sariko, fa rehefa manao izany aho dia mahazo aina kokoa raha toa ka tsy mangalatra ny voninahitr'ilay sary io mari-drano io, na dia manatanteraka ny asany aza. Amin'ity lahatsoratra ity, Hampianariko anao ny fomba famoronana mari-drano ao amin'ny Photoshop, zavatra marobe, manan-kery ho an'ny haizina sy hazavana fiaviana. Hampianariko anao ny fomba hamoronana ny mari-drano anao avy amin'ny sary famantarana na avy amin'ny rangotra ka ianao no manapa-kevitra ny amin'ny fomba hanasoniavana ny sarinao.
1 Watermark avy amin'ny lahatsoratra
1.1 Mamorona fisie miaraka ambadika mangarahara
1.2 Safidio ny endritsoratra
1.3 Ovao ny toetra mampiavaka ny sosona lahatsoratra ary apetaho ny vokarin'ny alokaloka
1.4 Tehirizo ao amin'ny PNG ny mari-drano anao
2 Watermark avy amin'ny sary famantarana
2.1 Sokafy ny sary famantarana ary esory ny lamina
2.2 Andao hanova ny toetran'ny lahatsoratra
2.3 Andao hanova ny toetran'ilay fanoharana
3 Fanamarihana farany
3.1 Ahoana no fomba hanampiako ny mari-drano misy ahy?
Watermark avy amin'ny lahatsoratra
Mamorona fisie miaraka ambadika mangarahara
Ny zavatra voalohany hataontsika dia mamorona rakitra vaovao ao amin'ny Adobe Photoshop. Tsy dia misy dikany loatra ny refy, saingy mamporisika anao aho hisafidy habe izay tsy dia lehibe loatra, satria hahazo aina kokoa ianao rehefa mampiditra ny mari-drano ataonao amin'ny sary. Nisafidy takelaka iray pixel an'arivony aho, habe sahaza izany ho an'ny zavatra tianay hatao. Alohan'ny hamoronana ilay rakitra, amin'ny antsipirian'ny presets tsy maintsy misafidy ambadika mangarahara ianao.
Safidio ny endritsoratra
Tsindrio ny fitaovana an-tsoratra ary safidio ny endritsoratra izay irinao. Amin'ity tranga ity dia manana fahalalahana tanteraka ianao, satria io fika io dia matetika no miasa tsara amin'ny karazana font rehetra. Nisafidy ny Open Sans mahazatra aho ary nanome azy habeny 30 pt dia nosoratako teo afovoany ny lahatsoratra izay ho soniaviko. Omeo loko fotsy na fotsy volondavenona izy.
Ovao ny toetra mampiavaka ny sosona lahatsoratra ary apetaho ny vokarin'ny alokaloka
Handeha isika ampidino ny famenoana ny sosona lahatsoratra hatramin'ny 40%. Ny zavatra hataontsika manaraka dia hanampy antsika hampandeha bebe kokoa ny sonia, noho izany dia hialantsika ny fanovana azy mba hampifanaraka azy amin'ny sary tsirairay. Voalohany, eo amin'ny sosona lahatsoratra dia hanazava ny fiantraikan'ny alokaloka isikaMila tsindrio fotsiny ilay mari-pamantarana fx (hita eo amin'ny faran'ny takelaka "sosona") ary safidio ny alokaloka. Ny masontsivana nofaritan'izy ireo momba an'ity vokatra ity dia miankina amin'ny endriny nofidinao tamin'ity indray mitoraka ity, tsy maintsy hitsapana ianao. Raha manampy anao io dia avelako pikantsary ho an'ireo nanompo ahy ianao. Amin'ny loko dia mamporisika anao hisafidy volondavenona mainty aho.
Tehirizo ao amin'ny PNG ny mari-drano anao
Ny dingana farany dia ny famonjena ny asantsika ho azy ampitao amin'ny PNG ny fisie, mitazona hatrany izany mangarahara izany. Tehirizo ao anaty fampirimana izany ary asio eo hatrany am-pelatananao ny mari-drano vaovao hanasoniavana ny sarinao.
Watermark avy amin'ny sary famantarana
Sokafy ny sary famantarana ary esory ny lamina
Raha efa manana sary famantarana ianao, na raha manana eritreritra ny hanao izany ianao dia tokony ho fantatrao fa ny fampiasana azy ho mari-drano dia hevitra tsara. Ny zavatra voalohany hataontsika dia sokafy ao amin'ny Photoshop ny sary famantarana ary raha amin'ny a loko manodidina (toy ny tranga misy antsika eo amin'ny sary mavo ny sary famantarana) hesorinay izy io mba hanana mangarahara fiavianay.
Andao hanova ny toetran'ny lahatsoratra
Raha misy typografia sy sary ny logo anao, hifantoka amin'ny lahatsoratra aloha isika. Fisafidianana ny sosona lahatsoratra, hampidininay hatramin'ny 0% ny famenoana ary hanokatra ny menio style layer isika (amin'ny alàlan'ny fanindriana ny mari-pamantarana fx amin'ny takelaka sosona ary hanery ny "stroke" amin'ny menio mitete-midina). Hanao vokany roa isika: tapaka lalan-dra sy aloka mitete.
Amin'ny alàlan'ny fampiatoana «preview» dia mifehy ny fisehoan'ny fanovana ianao. Tsy maintsy manitsy ny haben'ny kapoka, Nomeko lanja 2 px izy io, fa ny zava-drehetra dia hiankina amin'ny endriny nofidinao sy ny tsironao. Ao amin'ny «loko» dia mifidiana fotsy.
Handeha any isika apetraho ny vokarin'ny alokaloka. Manoro hevitra anao aho hisafidy a loko volondavenona mainty, fa afaka misafidy mainty ianao raha tianao. Ny zava-dehibe dia loko mainty izy io. Milalaova ireo masontsivana hafa mandrapahafaly anao ny valiny. Na dia resaka tsiro aza ity dia ireto misy soatoavina nanompo ahy.
Andao hanova ny toetran'ilay fanoharana
Ny sary famantarana anay dia misy ny typografia sy ny fanoharana, ny bubble kabary. Ny fomba izay harahintsika dia hitoviana amin'ilay teo aloha ihany. Hanao effets roa izahay, fa amin'ity indray mitoraka ity fisafidianana ny sosona fanoharana: "stroke and drop shadow". Hifanarahanay ireo masontsivana mba hifanaraka tsara amin'ny sary an-tsary (avelako pikantsary nampiasako ianao). Manoro hevitra aho fa ny lokon'ny fikorotanana sy ny aloka dia hitovy tanteraka amin'ny nofidinao ho an'ny typografia.
Tsy hisy izany manondrana ny kinova vaovaonay ny logo amin'ny endrika PNG hahafahana mampiasa azy io ho mari-drano amin'ny sarinay.
Ahoana no fomba hanampiako ny mari-drano misy ahy?
Azonao atao ny manampy ny mari-drano misy anao amin'ny Photoshop. Sokafy amin'ny sary ilay sary ary sintomy ny PNG izay hafarana ho sosona misaraka. Apetraho eo amin'izay tianao izany ary omeo ny habe tianao. Tsarovy koa izany azonao atao foana ny manova ny opacity ny mari-drano eo amin'ny tapany ambony amin'ny takelaka misy sosona, raha mahatsapa ianao fa amin'ny sary rehetra dia manaitra loatra ny sary famantarana (Matetika aho dia mampidina ny opacity ny mari-drano eo amin'ny 50%).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba hamoronana mari-drano amin'ny Photoshop